I-Lenovo Z5 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-Lenovo Z5 Pro ngoku isemthethweni: Isilayidi esilayishayo kunye nexabiso eliphantsi
UEder Ferreño | | lenovo, Iiselfowuni
Kubonakala ngathi iimveliso zaseTshayina zicacile, inotshi iqala ukunyamalala kwizikrini zabo. Endaweni yoko bazisa isikrini esityibilikayo, njengoko sele sibonile kwi Xiaomi Mi Mix 3 kwaye kule veki kwi Hlonipha iMicrosoft 2. Kwaye ngoku Sifumana ifowuni entsha ngolu hlobo lwesikrini, iLenovo Z5 Pro. Umenzi sele eveze ifowuni yakhe entsha ngokusemthethweni.
Le Lenovo Z5 Pro inesikrini esityibilikayo, ii-specs ezilungileyo, kunye nexabiso eliphantsi. Kuza nomlinganiselo wesikrini we-95,06%. Iscreen esihlala ngaphambili, sinee-bezels ezibhityileyo. Yintoni enye esinokuyilindela kuyo?
Esi sixhobo siba sesokuqala ukuba nolu hlobo lwesikrini, nangona singafikeleli kwinqanaba eliphezulu. Yimodeli efikelela kwinqanaba eliphakathi kuluhlu yentengiso, icandelo ekukhuleni ngokupheleleyo, kwaye kuza nexabiso elifanelekileyo kuyo. Yintoni enokukunceda uthengise ngcono.
1 Ukucaciswa kweLenovo Z5 Pro
Ukucaciswa kweLenovo Z5 Pro
Ukuthobela ngokupheleleyo iinkcukacha, Ke lolukhetho olufanelekileyo kwabo bafuna imodeli enikezela ngento engaphezulu kuluhlu oluphakathi lwesiqhelo. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kweLenovo Z5 Pro:
IsikriniI-6,39-intshi ye-Super AMOLED ene-HD epheleleyo + isisombululo se-2340 x 1080 pixels
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 710 octa-core eyenziwe nge-14nm
Ukugcinwa kwangaphakathi: 64 / 128 GB
Ikhadi lemifanekisoIadreno 616
Ikhamera esemva: I-16 + 24 MP ene-f / 1.8 ukuvula kunye ne-flash-tone LED Flash
Ikhamera yangaphambili: I-16 + 8 MP ene-f / 2.2 ukuvula kunye nekhamera yesibini ye-infrared
Ukuxhuma: I-Bluetooth 5, 4G / LTE, i-SIM ezimbini, i-WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS
Abanye: I-NFC, isivamvo somnwe womnwe phantsi kwescreen, Uhlobo C lwe-USB
Ibhetri: 3350 mah
Ubungakanani: 155,12 × 73,04 × 9,3 mm.
Ubunzima: I-210 gram
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.0 Oreo ene-ZUI 10.0 njengobume bokwenza ngokwezifiso
Kwisikrini, umenzi waseTshayina ukhethe iphaneli yeSuper AMOLED eyenziwe yiSamsung. Iqinisekisa umgangatho omkhulu womfanekiso ngawo onke amaxesha, ngokungathandabuzekiyo oya kuba yinto ebalulekileyo xa ubukele iividiyo okanye iifoto kwifowuni. Iscreen yeyona nto ibalulekileyo kule Lenovo Z5 Pro, nangona ngaxeshanye iyeyona isisemngciphekweni, ngakumbi ngokuhambisa kwayo. Ke oku kunokuba yingxaki kwabanye abasebenzisi.
Sifumana iyonke iikhamera ezine kwisixhobo. Baye bakhetha ikhamera ngasemva kabini, into ephantse inyanzeleke namhlanje kule premium mid-range, ukongeza kwikhamera ephindwe kabini ngaphambili. Enkosi ngokungabikho kwenotshi, ikhethe le nkqubo, evumela ukuba kufakwe iinzwa ezimbini ngaphambili kwifowuni. Zonke iikhamera zezixhobo zixhotyiswe ngobukrelekrele bokuzenzela, obazisa ngeendlela ezongezelelweyo zokufota.
Enye into apho le Lenovo Z5 Pro ilandela khona imeko yintsimbi yeminwe. Kwezi veki sibona iimodeli ezininzi bazisa inzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen. Oku kuyenzeka kwakhona kunye nemodeli yohlobo lwesiTshayina. Ke banokuthatha imisebenzi eyahlukeneyo yenziwa ngokubonga ngokufanayo.
Le fowuni sele ihanjisiwe ngokusemthethweni e-China, ke sele siyazi ukuba iya kuba yintoni indawo yayo yokuqala. Kulindeleke ukuba iye kwi ibekwe kwintengiso kwilizwe laseAsia ngoNovemba 10. Abasebenzisi kweli lizwe abanomdla kuyo banokuyibhukisha kwiivenkile ezahlukeneyo okanye kwiwebhusayithi yomenzi.
Malunga nokuqaliswa kwale Lenovo Z5 Pro eYurophu asazi nto okwangoku. I-brand isungula iimodeli zayo eYurophu, ke kusenokwenzeka ukuba esi sixhobo siza kufika, kodwa asinayo idatha ukuza kuthi ga ngoku. Ke siyathemba ukuba okuninzi kuya kufundwa malunga nayo kungekudala.
Oko sele sikwazi ukuba amaxabiso akho China, eya kusebenza njengesikhokelo. Zimbini iinguqulelo zefowuni ezithengiswayo. La ngamaxabiso abo:
Inguqulelo ene6 / 64 GB: 1998 yuan (malunga nama-252 eeuros zokutshintsha)
Inguqulelo ene-6/128 GB: i-2289 yuan (i-290 euro ukutshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Lenovo Z5 Pro ngoku isemthethweni: Isilayidi esilayishayo kunye nexabiso eliphantsi
Ifowuni 'ye-clamshell' ye-Samsung W2019 sele inomhla wokumiliselwa, kwaye ingoNovemba olandelayo
Yintoni i-WiFi ye-AC kwaye kutheni kulungile ukuyisebenzisa